Faiba glaasi ntupu, faiba glaasi Yarn, faiba glaasi Window Screen - Huili
Self-nyagide faiba glaasi Mezie
Polyester Ohere ihuenyo
Igwe anaghị agba nchara window ihuenyo
Wuqiang County Huili faiba glaasi Co. Ltd, e guzobere na 2008, na e odude ke wuqiang asị, hengshui, Hebei china. Nnukwu mmepụta isi nke faiba glaasi window screen.With afọ mmepe, aghọwo ihe integrated enterprise na nnyocha na mmepe, mmepụta, ahịa, na-ebupụ na imekọ ihe ọnụ. Na a nnukwu ákwà nnyocha igwe, n'ịkpụzi igwe na ndị ọzọ elu mmepụta na-ajụ-sized akụrụngwa.
Faiba glaasi ada Screen
Faiba glaasi ofufe ihuenyo na-kpara si ịkwanyere ntekwasa otu eriri. Faiba glaasi ahụhụ ihuenyo eme ka ezigbo ihe onwunwe na ulo oru na-akọ ugbo ụlọ na-pụọ ijiji, anwụnta na obere ụmụ ahụhụ ma ọ bụ maka nzube nke ventilashion. Dị ụdị windo a na-ahụkarị na-eme na ihuenyo ụmụ ahụhụ ma ...
No-Lee-Um faiba glaasi ahụhụ Screen
No-Lee-Um faiba glaasi ahụhụ Screen Tọrọ kpara faiba glaasi ahụhụ ihuenyo eji megide obere ijiji na anwụnta, na-mmetụta nke No-ahụ. A na-akpọkwa ya Igwe Ahụhụ Ahụhụ Anya ma ọ bụ Igwe Window Apụghị Ahụ Anya. Nke a No-see-um faiba glaasi ahụhụ ihuenyo ukwuu n'ime unyi agba. Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ...